June 2020 - Page2of 20 - Nalonetardiary
ထီထိုးတဲ့သူတိုင်း ထီပေါက်ကိန်းရှိသည် ၂၀၂၀ ဇူလိုင်လအတွက် နေ့သားအလိုက် အကျိုးပေး အောင်ဘာလေထီဂဏန်းများနှင့် ထီထိုးရမည့်အချိန်အပိုင်းအခြား တနင်္ဂနွေသားသမီးများ – အိမ်ရဲ့ဧည့်ခန်းမှာ ထီပေါက်ဂဏန်းရှိနေပါတယ်။ တနင်္ဂနွေသားသမီးတစ်ဦးနှင့် စပ်ပြီးထိုးပါ။ ကြက်ဥကြော်စားပြီးထိုးပါ။ တနင်္ဂနေ့ နေ့လည်(၁)နာရီ(၃၀)မှ – (၃) နာရီအတွင်း အနီရောင်များများပါသော အဝတ်အစားဝတ်ဆင်ပြီးထိုးပါ ။ ( ၁ ၊ ၉ ၊ ၃ ) များများပါတဲ့ လက်မှတ်ကို ရှာပြီးထိုးပါ။ တနင်္လာသားသမီးများ – လမ်းဘေးက ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုမှာ ထီပေါက်ဂဏန်းရှိနေပါတယ် ။ အင်္ဂါသားသမီးတစ်ဦးနှင့် စပ်ပြီးထိုးပါ။ ကြာဇံကြော်စားပြီးထိုးပါ ။ တနင်္လာနေ့ နံနက်(၉)နာရီမှ – (၁၀)နာရီ (၃၀) အတွင်း နီညိုရောင်များများပါသော အဝတ်အစားဝတ်ဆင်ပြီထိုးပါ ။ ( ၃ ၊ … Read more
Categories Careers Tags ထီပေါက်ကိန်း
ဆီပူလောင် ရေနွေးပူလောင် ဆေးနည်းများ ( ၁ )ကြက်ဥ ပြုတ်ပီး အကာကိုဖယ်ပါ ။ အနှစ်ကို ဒယ်အိုး သန့်သန့်နဲ့ မီးအပူ ပေးလှော်ပါ ။ အရည် ပျော်အောင်ထိပေါ့ အရည်ပျော်လာရင်ဆီလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မည် ၎င်းကိုအနာမှာ လိမ်းပေးကြပါ။ ကျနော် လက်တွေ့သုံးခဲ့ဘူးတာ မီးလောင်ဒဏ်ရာတောင် ပျောက်တယ် ။ အမာရွက် လို့တောင်မရှိဘူး နဂိုအသားတိုင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကူညီနိုင်တာဆို လို့ ဘာမှမရှိလို့ ဆေးမီးတိုလေး ရေးပို့ပေး ရတာပါ။ မြန်မြန်နေပြန်ကောင်း ကြပါစေ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ( ၂ )ကြက်သား၏ အဆီကိုကြော်ထားသောဆီကို အပူလောင် အနာများကိုလိမ်းပေး လျင်လည်း သက်သာပျောက်ကင်းပြီး အနာအမာရွတ်မကျန်ပါ။တကယ်ကောင်းသောလက်တွေ့ဆေးနည်းပါ ။ ( ၃ )ဆီပူလောင် ။ အပူလောင် အမာရွတ်ဟောင်းများအားကွမ်းသီးခြောက်ကို သွေးလူးပေးပါ ။ … Read more
Categories Hearth Tags ရေနွေးပူလောင်
ဘာကြောင့်ဘုရားပန်းကပ်ရတာလဲ ကျွန်တော်တို့အိမ်ကဘုရားစင်မှာ ဘုရားပန်းကပ်ကြတဲ့ဓလေ့ရှိပါတယ် အနံ့ရှိတဲ့ပန်း မရှိတဲ့ပန်း…ပန်းအလှ…အောင်သပြေ.စတဲ့ပန်းတွေထိုးကြတယ် အဓိက က ဘာကြောင့်ဘုရားပန်းကပ်ကြရတာလဲ….. မြတ်စွာဘုရားကပန်းကြိုက်လို့လား ပန်းကမွေးတဲ့အနံ့ကိုဘုရားကကြိုက်တာလား … ဒါမှမဟုတ်…. ဘုရားစင်လှနေအောင်လို့လား….. ဘာသာခြားတစ်ချို့ကပြောလေ့ရှိတယ်မင်းတို့ဘုရားကပန်းကြိုက်တယ်….ငါတို့ဘုရားဆိုဘာပန်းမှမကြိုက်ဘူးဆိုပြီးပြောတတ်တယ်…. ကျွန်တေယ်လည်းငယ်ငယ်ကဆို အဲ့လိုအတွေးတစ်ချို့တွေးဖူးပါတယ်…ဘုရားက ပန်းမန်နံ့သာကိုတောင်မဆွတ်ဖြန်းရဘူးလို့ ကိုးပါးသောသီလမှာဟောကြားခဲ့ဖူးတယ်…. ဘာကြောင့်ငါတို့ပန်းကပ်စရာလိုသလဲလို့ပေါ့လေ ကျွန်တော်အိမ်ဘုရားစင်မှာပန်းကပ်လေ့မရှိခဲ့ဘူး … တစ်ခါသာတော့ဒီကိစ္စအမေနဲ့အကြီးအကျယ်အငြင်စအခုန်ဖြစ်ကြတယ်….ကျွန်တော်ကတော့ဘုရားပန်းကပ်စရာမလိုဘူးပေါ့လေ….အမေကရှင်းပြပါတယ်…. အမေကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အကြွင်းမဲ့ယုံကြည်သူဆိုတော့ ပန်းကပ်တဲ့ဘက်ကပေါ့ နောက်ဆုံးအမေ့ရဲ့ အတွေးအခေါ်ကိုအနည်းငယ်တော့လက်ခံလိုက်ရတယ် သဒ္ဒါဆိုတဲ့စကားပါပဲ ကျွန်တော်အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှတွေးမိတာတွေမှာ … ဒီသဒ္ဒါတရားဆိုတာလေးယှဉ်တွေးတတ်လာတယ် သဒ္ဒါတရားဆိုတာ …စိတ်နှလုံးက အတိုင်းအဆမရှိထွက်ပေါ်လာတဲ့ ပေးကမ်းချင်စိတ်လှူဒါန်းချင်စိတ်…သာဖြစ်ပါတယ်…. သဒ္ဒါစိတ်များရင် ကိုယ့်ဝတ်ထားတာတွေတောင်ချွတ်လှူချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖူးမှာပါ တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုပန်းကပ်တာဟာ … ဘုရားရှင်ကပန်းကြိုက်လို့လဲမဟုတ်ပါဘူး ပန်းရနံ့ကိုဘုရားကကြိုက်တာကြောင့်လည်းမဟုတ်ပါဘူး ဘုရားစင်တင့်တယ်ချင်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး မိမိရဲ့စိတ်ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဘုရားရှင်အပေါ်ကြည်ညိုစိတ်ကြောင့်…. ကိုယ့်လှမယ်လို့ထင်တဲ့ပန်းနံ့သာတွေကို ကပ်ကြတာပါ… နောက်ပြီးဒီသဒ္ဒါစိတ်ကြောင့်ပဲ….ဘုရားရဲ့အနားမှာအနံ့ဆိုးတွေမရှိအောင်အမွေးနံ့သာပါတဲ့ပန်းကိုကပ်ကြတယ်…. ဒီသေဘာပါပဲ.. ကိုယ်စိတ်ရဲ့သဒ္ဒါသာဖြစ်ပါတယ် …. ဘုရားရှင်ကြိုက်ခြင်းမကြိုက်ခြင်းနဲ့မဆိုင်ပါဘူး …. သစ္စာလေးပါးကို…. ဆရာမကူပဲသိနိုင်တဲ့အင်အားဉာပညာကိုလေးစားကြည်ညိုလွန်းလို့ဖြစ်ခါတဲ့သဒ္ဒါတရားသာဖြစ်ပါတယ် … Read more
Categories Buddha Tags ဘုရားပန်း
June 28, 2020 by Nalonetar Diary
မိုးကောင်းမြို့ နန့်ရင်းရပ်ကွက်တွင် လမ်းတံတားဆောက်လုပ်ရေးမြေတူးစဉ် ကျောက်စိမ်းထွက်သောကြောင့် ဒေသခံများတူးဖော်နေ ဇွန် ၂၇ ၊ မိုးကောင်း မိုးကောင်းမြို့နယ် နန့်ရင်းရပ်ကွက်တွင် ရေမြှောင်းတူဖော်နေစဉ် ဒေသခံများမှ ကျောက်စိမ်းလိုက်ကောက်မှုများ ကြောင့် လုပ်ငန်းအပေါ် နှောင့်ယှက်မှုများ မဖြစ်စေရန် ရဲတပ်ဖွဲ့များ စောင့်ကြည့်နေရကြောင်း နန့်ရင်းရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောသည်။ “ပထမပိုင်းတော့ ရဲတွေဘာတွေမပါဘူးပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းက သွားပြောတယ်။ လာပြောတဲ့အချိန် ခဏတဖြုတ်ကြာရင် သူတို့ ဘက်ဟိုးကုတ်ရင်လည်း သွားပြီးမှ ဝင်ပြီးတော့မှ ကောက်ကြတာတွေရှိတာပေါ့။ “ဟု ၎င်းကဆက်ပြောသည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ညအချိန် ကျောက်စိမ်းခိုးတူးနေသူများလည်းရှိပြီး လုပ်ငန်း နှောင့်ယှက်မှုများ မဖြစ်စေရန်အတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့ ၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများမှ သွားရောက် စောင့်ကြည့်နေရကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။ “ဒေသခံတွေက လမ်းတူးနေပေမဲ့လည်း သူတို့လုပ်ငန်းခွင်ဆိုဒ်ထဲမှာ ကျောက်ဝင်ရှာကြတာပေါ့။ တခါတခါကျရင် ညဘက်လည်း … Read more
Categories Local News Tags မိုးကောင်းမြို့
Categories Careers, Knowledge Tags ကုဋေ ပြီးရင်
သင့္ ေသြးအမ်ိဳးအစားအလိုက္ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ား
Categories Careers, Life Tags ေသြးအမ်ိဳးအစား
အျမန္လမ္း ၂၆၁.၁ဖာလုံမွာ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့လူေတြကို ျပစ္မွတ္ထားစီးပြားရွာေနသူ ..
အမြန်လမ်း ၂၆၁.၁ဖာလုံမှာပါ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေကို ပြစ်မှတ် ထားစီးပွားရှာနေသူ ပိုစ့်မတင်ဘူးလို့နေတာ မတော်လောဘနဲ့စီးပွားရှာနေတဲ့လူတွေကြောင့် တင်လိုက်ပါတယ်…….. အမြန် လမ်းမှာ ကားပျက်လို့ ကျွန်တော် ဝပ်ရှော့ရှာတယ် စိုးမိုးကား​ဝပ်ရှော့ကိုတွေ့တယ် ရောက်တော့ အကိုရေ ကူညီပါအုံး ကားဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူး “​ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး ခေါ်ချင်ခေါ်မခေါ်ချင်နေ ခြေကြွခ နှစ်သောင်း ပေးရမယ်ညီ ”တအားမဝေးဘူး ၁မိုင်လောက်ဘဲရှိတယ် ကိုယ်ကတကယ် ဒုက္ခရောက်နေတော့ နှစ်သောင်းမပြောနဲ့နှစ်သိန်းဆိုလဲဝင်မလေးဘူးပေးဖို့ကို တ ခြား ကားအကူညီနဲ့ ကားလဲသူ့​ဝပ်ရှော့ ရောက်တော့ ဆီပန့်လဲရမယ်တဲ့ အဲ့တာပျော်ဘွယ်ကိုသွားဝယ်ရမယ် ကံကောင်းချင်တော့ညီလေးတစ်ယောက်က အလကားကူညီပေးတယ် အဲ့မာစပြီ သူကယ်ရီခ မရတော့ ပစ္စည်း အလွဲပြောဝယ်ခိုင်းတယ် ညနေ၆နာရီကြတော့သူလဲ ပျောက်သွားတယ် ၇နာရီထိုးတော့ ကူညီပေးတဲ့ညီလေးပြန်ရောက်လာတယ် သူဝယ်ခိုင်းတဲ့ပစ္စည်းကအလွဲ သူတပည့်တက်ပေးလဲတက်မရ ည၉နာရီ မှာ သူပြန်ရောက်လာတော့ ကားထဲထည့်ရမဲ့ပစ္စည်းအမှန်ပါလာတယ် ကျွန်တော်ကို လေးသောင်း တောင်းတယ် … Read more
Categories Local News Tags ကားျပင္
သစ္ခြနဲ႔ ႏွင္းဆီပင္ေတြ စိုက္ထားလို႕ အပင္ကိုဖ်က္ဆီးတတ္တဲ့ ပိုးေတြက်ေရာက္ေနရင္
ကျွန်တော်တို့ ငှက်ပျောသီးကို စားသုံးတဲ့ အခါမှာ ငှက်ပျောခွံ(Banana peel)ကို စွန့်ပစ်လေ့ ရှိတယ်။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ စွန့်ပစ် ငှက်ပျောခွံမှာ အပင်များအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော အာဟာရဓာတ်တွေ များပါဝင်နေပါတယ်။ ငှက်ပျောခွံကို ရေထဲ၌(၃)ရက်ခန့်ကြာသည့်တိုင်အောင် စိမ်ထားပြီး ၄င်းရေကို အပင်တွေအတွက် လောင်းပေးနိုင်သလို၊ ငှက်ပျောခွံကို အပင်ခြေ၌ အုံပေးထားရုံဖြင့် အပင် ကျန်းမာရေးအတွက် မရှိမဖြစ် ပိုတက်ဆီယမ်၊ နိုက်ထရိုဂျင်၊ ဖော့စဖရပ် နှင့် မဂ္ဂနီဆီယမ် အဟာရဓာတ်တွေ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ပြောပြချက်တာက အပင်တွေမှာ ဖြုတ်ပိုး၊ပျပိုး (Aphid)လို့ခေါ်တဲ့ အပင်ကိုဖျက်ဆီးတတ်တဲ့ ပိုးတွေကျရောက်နေပါက ငှက်ပျောခွံကို အပင်၌ ချိတ်ဆွဲထားပါက ကင်းစင် သွားပါလိမ့်မယ်။ သစ်ခွ နဲ့ နှင်းဆီပင် တွေအတွက် အရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်။ ဘဝခါးခါး Zawgyi … Read more
Categories Careers, Knowledge Tags ငှက်ပျောသီး
ေသာက္ေတာ္ေရကပ္လွဴရာမွာ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္စြာ ျပဳလုပ္ျပီ းကပ္ေပမယ့္ လြဲမွားေနတဲ့ အလႊဲေလးေတြ
ဘုရားရှင်ကို သောက်တော်ရေကပ်ရာမှာ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာ ပြုလုပ်ပြီးကပ်တတ်ပေမယ့် အလွဲလေးများရှိနေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် ဘုရားရှင်ကို ဆွမ်းကပ်တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သောက်တော်ရေကပ်တဲ့အခါတွေမှာ သာမန်အားဖြင့် သန့်ရှင်းသပ်ရပ်အောင် ပြုလုပ်ပြီး ကပ်တတ်ကြပါတယ် ရဟန်းသံဃာတော်များကို ဆွမ်းကပ်တဲ့အခါလည်း အတတ်နိ ုင်ဆုံး ကောင်းမွန်သန့်ရှင်းအောင် ပြုလုပ်ပြီးကပ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဓိက အရေးကြီးတာ မပြုလုပ်နိ ုင်ကြဘူးဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါဘာလည်းဆိုတော့ ဘုရားရှင်ကိုပဲ ကပ် ကပ် ရဟန်းသံဃာတော်ကိုပဲ ကပ်ကပ် သောက်တော်ရေကို ရေစစ် နဲ့စစ်ပြီး ကပ်ဖို့ပါပဲ။ (အခုခေတ်ရေသန့်ဆိုပေမယ့် ၂၀ liter ဘူးထဲက ရေက PH7ရေသန့် လုံးဝမရောက်သေးတဲ့ ရသန့်တံဆိပ်တွေအများကြီးပါ) ဝိနည်းတော်မှာ ရေစစ် နဲ့ စစ်ပြီး မကပ်ဘူးဆိုရင် သောက်သုံးသူ ရဟန်းတော်များဟာ အာပတ် သင့်ပါတယ်။ … Read more
Categories Buddha Tags သောက်တော်ရေကပ်ရာ